Xiddiga kooxda Madrid Hazard oo doonaya inuu ciyaaro shan ilaa iyo lix sano.
Home Horyaalka Spain Xiddiga kooxda Madrid Hazard oo doonaya inuu ciyaaro shan ilaa iyo lix...
Xiddiga Real Madrid Eden Hazard ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii wado ugu yaraan shan kale iyo lix sano ah madaama weeraryahankii hore ee kooxda cheslea ay maalmo mugdi ah u noqotay marka loo eego arrimaha taam ahaanshaha ee Santiago Bernabeu.
Hazard ayaa Chelsea ka yimid sanadkii 2019 heshiis dhamaa 100 million iyagoo loo arkayey bedelka ku haboon ee Ronaldo oo Juventus ku biiray laakiin waqtigiisii caasimada Spain waxaa soo gunaanaday dhaawacyo badan.
30-jirkan oo qarka u saaran inuu seego laba ama saddex toddobaad sababtuna tahay muruqa lugta bidix, ayaa kaliya lagu bilaabay 20 kulan LaLiga lix ka mid ah xilli ciyaareedkan wuxuuna dhaliyay kaliya seddex. goolal.
Hazard wuxuu ku guuldareystay inuu dhameystiro 90 daqiiqo oo buuxda ciyaar kasta oo uu u ciyaaro Madrid 2020-21 tartamada oo dhan, laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee Belgium ayaa weli ah mid fiican.
Waxaan kaliya rajeynayaa inaan ciyaaro kubada cagta inta ugu macquulsan, mar walbana waxaan isku dayaa inaan nafteyda ku raaxeysto garoonka dhexdiisa, ”ayuu u sheegay On Front Foot.
“Marka ay timaado dhamaadka shaqadayda waxaan dib u eegi karaa guulaha aan gaadhay, laakiin ahmiyadayda hadda waa inaan si fiican u ciyaaro oo aan ku raaxeysto kubadeyda.
Kama fekerayo halka aan joogi doono sannadaha soo socda, waxaan isku dayaa inaan diirada saaro kulanka soo socda iyo kulanka xiga ee tababarka.
Previous articleInaan la ciyaaro messi waxay noqon laheyd Ri’yo Rumoowday Verrati oo dareenkiisa ka hadlay ka hor kulanka barce iyo PSG.
Next articleDevid Alaba oo ku xiraya mushaar culus kooxdii isaga dooneysa.